ICC ကအနုညာတစီရင်ကုန်ကျစရိတ် Calculator ကို
ICSID အနုညာတစီရင်ကုန်ကျစရိတ် Calculator ကို
ခုံသမာဓိ Institution များ
နေအိမ် / အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက် / အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်အတွက်တတိယပါတီရန်ပုံငွေရှာခြင်းထုတ်ဖော်ရန်တာဝန်
14/01/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိမှတဆင့်အငြင်းပွားမှုများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာ, ဒါကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အနုညာတစီရင်၏ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းရှိမရှိ, ပါတီများ ပို. ပို. ဒါခေါ် "တတိယပါတီရန်ပုံငွေ" ကိုအားကိုး ("TPF").
TPF ရှေ့ဆက်အနုညာတစီရင်၎င်းတို့၏တောင်းဆိုမှုများတွန်းဖို့တခြားအဖွဲ့အစည်းများထံမှငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုတောင်းဆိုဖို့စွမ်းရည်နှင့်အတူတစ်အငြင်းပွားမှုမှအလားအလာပါတီများကိုထောက်ပံ့ပေး, သူတို့ကတရားစွဲဆိုမှုများ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုထမ်းနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆန္ဒသူတို့ကိုယ်သူတို့အခါ. လဲလှယ်အတွက်, တတိယပါတီငွေကြေးထောက်ပံ့များသောအားဖြင့်ချီးမြှင့်နောက်ဆုံးသောငွေပမာဏ၏အချို့သောအဘို့ကိုနှိမ်ပါလိမ့်မယ်, အဆိုပါငွေကြေးထောက်ပံ့ပါတီအမှုအနိုင်ရသင့်တယ်. အဖွဲ့အစည်းများ၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းတတိယပါတီတွေအကြောင်းအဖြစ်ပြုမူစေခြင်းငှါ, တှေ့ရှိရသောတစ်ဦးမျှမျှတတပြည့်စုံစာရင်း ဒီမှာ.
ဘေးဖယ်ကုန်ကျစရိတ်သူတို့ကိုယ်သူတို့ထမ်းနိုင်ခြင်းသူတို့အားတရားမျှတမှုပြန်လည်ကုအားဖွင့်ခြင်းနှင့်ပါတီများ equalizing ထံမှ, TPF ပို. ပို. ထက်မြက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း technique ကိုအဖြစ်ချီးကျူးနေသည်, ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏ငွေဖြစ်လွယ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့အမြတ်အစွန်းလုပ်ငန်းများဆက်လက်ခွင့်ပြုထားသည့်. သူတို့ရဲ့ဥပဒေရေးရာအငြင်းပွားမှုများကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ဖို့ပြင်ပမြို့တော်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, သူတို့ခုံသမာဓိတွင်၎င်းတို့၏ရန်ပုံငွေတက်ချည်နှောင်သို့မဟုတ်အပြိုင်အဆိုင်အကြွေးနှုန်းဆုံးရှုံးကြဘူး (အရာဥပဒေရေးရာတရားစွဲဆိုမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်လာသောအခါများသောအားဖြင့်ဆိုးရွား, ၎င်းတို့၏တောင်းဆိုမှုများများ၏တန်ဖိုးရှိသမားရိုးကျစီးပွားဖြစ်ချေးငွေန်ဆောင်မှုအားဖြင့်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရနိုင်ပါကတည်းက).
Practitioner ဒီငွေကြေး tool ကို၏များစွာသောကောက်ကြောင်းကပါဝငျအဆိုပါထုတ်ဖော်တာဝန်ဝတ္တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်မပျက်ဆက်လက်တည်ရှိ.
TPF အမြင်ကျယ်အလေ့အကျင့်များတွင်အသုံးပြုလျက်ရှိနေသော်လည်း, ထိုသို့မျှ binding စည်းမျဉ်းမူဘောင်လည်းမရှိ. ရည်ညွှန်း၏တစ်ဦးပွိုင့် non-စည်းနှောင်ဖြစ်ပါသည် 2014 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်များတွင်စိတ်ဝင်စားမှုများ၏ပဋိပက္ခအပေါ် IBA လမ်းညွှန်ချက်များ, အောက်ပါထုံးစံ၌ TPF သတ်မှတ်ထားတဲ့:
"ဤရည်ရွယ်ချက်များသည်, စည်းကမ်းချက်များ '' Third-party ငွေကြေးထောက်ပံ့ 'နဲ့' အာမခံ '' ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးကြောင်းမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းကိုရည်ညွှန်း, သို့မဟုတ်အမှု၏တရားစွဲဆိုမှုသို့မဟုတ်ကာကွယ်ရေးအခြားပစ္စည်းထောက်ခံမှုနှင့်တစ်ဦးကိုတိုက်ရိုက်စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားရှိပါတယ်, တစ်ပါတီ indemnify ဖို့ဒါမှမဟုတ်တာဝန်, အဆိုပါခုံသမာဓိထဲမှာပြန်ဆိုခံရဖို့ဆု ".
TPF ပတ်လည်အငြင်းပွားဖွယ်ရာများစွာအငြင်းပွားမှု၏ခုံသမာဓိလူကြီးနှင့်အတူအကျိုးစီးပွား၏အလားအလာပဋိပက္ခများကိုထုတ်ဖော်ဖို့တာဝန်ဖို့ပြောပြတယ်. တတိယပါတီတွေအကြောင်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအငြင်းပွားမှုများမှပါတီများသူတို့ကိုယ်သူတို့မဟုတ်ကတည်းက, သူတို့က သိသာထင်ရှား အဆိုပါပါတီများခညျြနှောငျသောတူညီထုတ်ဖော်တာဝန်ဝတ္တရားအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်မရ. ဤလုပ်ငန်းစဉ်၏အလွဲသုံးစားမှုများအတွက်အလားအလာဖန်တီး, အဖြစ်မပြုနိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆု rendering များ၏အန္တရာယ်အနာဂတ်၌အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခရှာဖွေတွေ့ရှိရပါမည်.
တချို့ကစနစ် Self-စညျးမဉျြးဥပသည်နှင့်အဘယ်သူမျှမပြဿနာတွေဟာလက်ရှိမူဘောင်ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မည်ကြောင်းကိုငြင်း, ပဋိပက္ခသတိထားသူတို့အားအနိုင်ရတဲ့အတွက်အများဆုံးစိတ်ဝင်စားသောတူညီသောလူဖြစ်ကြပြီး, အရှင်မဆိုအလားအလာပဋိပက္ခထုတ်ဖော်မည်ဟုကတည်းက.
သို့သျောလညျး, အချို့ခုံသမာဓိ၏မကြာခဏ-အထိခိုက်မခံဘာသာရပ်ကိစ္စစဉ်းစား, ဒီခိုင်လုံသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပါတယ်. ပွညျထောငျစု၏အခွင့်အရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားနှင့်အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခုံသမာဓိအပေးအယူ, အစားမျှသာပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများများထက်, နှင့်တရားစွဲဆိုမှုများ၏င့်လင်းမြင်သာခြင်းနှင့်ဘက်မလိုက်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တရားဝင်နှင့်အတည်ပြုရလဒ်များသေချာ.
ဤစိုးရိမ်မှုများမှတုန့်ပြန်, စိတ်ဝင်စားမှုမဆိုအလားအလာပဋိပက္ခများကိုဝေမျှဖို့တတိယပါတီတွေအကြောင်းတာဝန်ရှိမယ်လို့တစ် binding စည်းမျဉ်းမူဘောင်များချမှတ်ရန်အများအပြားသတိထား. အဆိုပါဆွေးနွေးမှုများကိုသိမှ, အဆိုပါ IBA လမ်းညွှန်ချက်များထုတ်ဖော်၏ပါတီများ '' တာဝန်တစ်ခုကျယ်ပြန်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ပေးခွငျးအားဖွငျ့ TPFs မှထုတ်ဖော်၏တာဝန်တိုးချဲ့ပါပြီ:
မည်သည့်ဆက်ဆံရေးထုတ်ဖော်၏ "ဟုပါတီများ '' တာဝန်, တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်, အဆိုပါခုံသမာဓိရုံးနှင့်ပါတီအကြား [...] လူပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ခုံသမာဓိထဲမှာပြန်ဆိုခံရဖို့ဆုအတွက်တိုက်ရိုက်စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားရှိခြင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူဆက်ဆံရေးတိုးချဲ့ခဲ့ပြီး, ထိုကဲ့သို့သောခုံသမာဓိများအတွက်ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ entity အဖြစ်, သို့မဟုတ် "ဆုများအတွက်ပါတီ indemnify ဖို့တာဝန်ရှိခြင်း.
အဆိုပါ ICC က, ယင်း၏အတွက် 2016 ခုံသမာဓိလူကြီး၏ပဋိပက္ခများ၏ထုတ်ဖော်ဘို့လမ်းညွှန်မှုမှတ်ချက်, အဆိုပါ IBA လမ်းညွှန်ချက်များ၏အသုံးအနှုန်းကူးယူခြင်းနှင့် TPF နှင့်အတူအကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခများထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်တာဝန်ပါဝင်သည်ထားပါတယ်. သို့သျောလညျး, ICC ကိုကမဖြစ်မနေအဆိုပါပါတီများတစ် TPF ၏တည်ရှိမှုထုတ်ဖော်ရန်အဘို့လုပ်မပေးခဲ့ပါဘူး, သောပြဌာန်းချက်ရဲ့ထိရောက်မှုကိုထိခိုက်စေ.
ခုံသမာဓိအဖှဲ့အစညျးမြားဖွငျ့သို့မဟုတ်ပြည်နယ်များကစည်းနှောင်မူဘောင်များချမှတ်သည်အထိ, TPF နှင့်အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခများထုတ်ပြန်အသိပေးခြင်းလိုသလိုဆက်လက်တည်ရှိဦးမည်, ပိုကောင်းတဲ့အတှကျသို့မဟုတ်ပိုဆိုးဘို့. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိများအတွက် TPF ၏တိုးမြှင့်ဆက်စပ်မှု, သို့သော်, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိတတိယပါတီရန်ပုံငွေထုတ်ဖော်ရန်တာဝန်နှင့် ပတ်သက်. စည်းမျဉ်းများမျက်နှာသာအတွက်စစ်သွေးကြွ.
Anastasia Choromidou, Aceris ဥပဒေ SARL
 အထွေထွေနျ Standard မှရှင်းပြချက်6(ခ)
 အထွေထွေနျ Standard မှရှင်းပြချက်7(တစ်ဦး).
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက်
အဆိုပါ SIAC အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများအောက်တွင်အနုညာတစီရင်၏သတိပြုပါရန်တုန့်ပြန် 2016
နှစ်နိုင်ငံအနုညာတစီရင်စာချုပ်များ (BAT ရဲ့): တစ်ခုက Update ကို
Task Force အားဖြင့်တင်ပြ third-ပါတီရန်ပုံငွေရှာခြင်းအစီရင်ခံစာ
အကြံပြု Links များ
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သည်ကြီးများအသင်း (ICC က)
ဒီ website တွင်အဆိုပါခုံသမာဓိအရင်းအမြစ်များကိုအားဖြင့်သင်တို့မှနှုတ်ဆောင်နေကြတယ် နိုင်ငံတကာခုံသမာဓိဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ Aceris ဥပဒေ.
EnglishShqipالعربيةՀայերենazərbaycan diliБеларуская中文(简体)中文(漢字)Eesti keelქართულიΕλληνικάहिन्दी; हिंदीBahasa Indonesia日本語Қазақ тіліភាសាខ្មែរкыргыз тили한국어KurdîພາສາລາວLatviešu valodaмакедонски јазикBahasa MelayuМонголမြန်မာစာپارسیРусскийSlovenčinaKiswahiliТоҷикӣภาษาไทยTürkçeУкраїнськаاردوOʻzbek tiliTiếng Việt
မူပိုင် © 2012-2018 · IAA ကွန်ယက်